ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရင်တွင်းစကားကပြတ်သားလှ၏။
မေတ္တာတရား၊ အကြင်နာတရား ထားခဲ့သော
က မ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား
လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်။
ကျွန်မ လွန်စွာမှ ကုသိုလ်ကံကောင်းခဲ့ပါသည်။
ဤအရာကို မည်သို့မျှ ပယ်ဖျက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
စာပေလောက ပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၉၉ တွင်ပုံနှိပ်သည်
On behalf of my sons,
Alexander and Kim,
and on my own behalf
who supported my husband
during his illness and
who have given my family
to have had suchawonderful husband
who always understood my needs.
Nothing can take that away from me.
ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် အဲရစ်(စ်) ၂၇၊ မတ်လ၊ ၁၉၄၆ - ၂၇၊ မတ်လ၊ ၁၉၉၉
စာရေးသူ kotun အချိန် 4/08/2013
ကဏ္ဍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရင်တွင်းစကားကပြတ်သားလှ၏။